လကောမှနျလဲမပါ လလေဲမတိုးတဲ့ McLaren ရဲ့ Elva - Myanmar Automobile and Equipment Directory
ယခုအခါမှာတော့ သူတို့ဟာ ယခင်နဲ့မတူ တမူထူးခြားတဲ့ ကားတစ်စီးကို ထုတ်လုပ်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကားဟာ သူတို့ရဲ့ ပထဦးဆုံးကားအမျိုးအစားဖြစ်သလို ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်း ပထဦးဆုံး ထုတ်လုပ်တဲ့ ကားအမျိုးအစား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီကားဟာ ဘယ်လိုကားအမျိုးအစားဖြစ်မလဲဆိုတာကို ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်…….
သူတို့ရဲ့ ပထဦးဆုံးကားအမျိုးအစား ဖြစ်တဲ့ ဒီကားကို McLaren Elva လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ ထူးခြားတဲ့ ပထမဦးဆုံးအချက်ကတော့ ရှေ့လေကာမှန်ပါဝင်လာခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒီအချက်နဲ့တင် ထူးခြားနေပါပြီ။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် သူတို့ ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကားမိုဒယ်အားလုံးထက်ပေါ့ပါး နေပါတယ်။ ရှေ့လေကာမှန်မပါတော့ မောင်းတဲ့သူတို့ လေမတိုးနိုင်ဘူးလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းထုတ်စရာတော့ ရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် လေမတိုးနိုင်တဲ့ နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ ဘယ်လိုနည်းပညာလဲဆိုတော့ ရှေ့ဘမ်ဘာမှာပါတဲ့ လေစုပ်ပေါက်တေကနေ ရှေ့ဘက်ကတိုးလာတဲ့လေတွေကို စုပ်ယူပြီး ဘောနပ်ဖုံးပေါ်ကတဆင့် ကားမောင်းနှင်သူရဲ့ ခေါင်းပေါ်ကနေကျော်သွားစေမယ့် နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတာပါ။
နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ အမိုးလုံးဝ မပါဝင်ပါဘူး။ အင်ဂျင်အနေနဲ့ကတော့ မြင်ကောင်ရေ ၈၀၄ ကောင်အားရှိတဲ့4liters တာဘို V8 အင်ဂျင် တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒီလိုစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု မြင့်မားတဲ့ အင်ဂျင်တပ်ဆင်ထားတာကြောင့် တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာ ၀ မိုင်ကနေ ၆၂ မိုင်နှုန်းအထိ အရှိန်တင်မောင်းနှင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး တစ်နာရီအတွင်းမှာတော့ မိုင် ၂၀၀ နှုန်းထိမောင်းနှင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားဒီဇိုင်းကိုတော့ အောက်က video မှာပဲကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီလိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး ထူးခြားတဲ့ ကားတစ်စီးရဲ့ တန်းဖိုးကတော့ ပေါင် ၁.၄ သန်းရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။
ဗွိတိနျအခွစေိုကျ McLaren ဟာ ကမ်ဘာပျါမှာ ပွိုငျကားအမြားအပွားကိုထုတျလုပျနတေဲ့ နာမညျကွီး ပွိုငျကားကုမ်ပဏီတဈခုပါ။
ယခုအခါမှာတော့ သူတို့ဟာ ယခငျနဲ့မတူ တမူထူးခွားတဲ့ ကားတဈစီးကို ထုတျလုပျမိတျဆကျခဲ့ပါတယျ။ ဒီကားဟာ သူတို့ရဲ့ ပထဦးဆုံးကားအမြိုးအစားဖွဈသလို ကမ်ဘာပျေါမှာလညျး ပထဦးဆုံး ထုတျလုပျတဲ့ ကားအမြိုးအစား ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ဒီကားဟာ ဘယျလိုကားအမြိုးအစားဖွဈမလဲဆိုတာကို ဆကျဖတျကွညျ့လိုကျကွရအောငျ…….
သူတို့ရဲ့ ပထဦးဆုံးကားအမြိုးအစား ဖွဈတဲ့ ဒီကားကို McLaren Elva လို့ အမညျပေးထားပါတယျ။ ထူးခွားတဲ့ ပထမဦးဆုံးအခကျြကတော့ ရှလေ့ကောမှနျပါဝငျလာခဲ့ခွငျးမရှိပါဘူး။ ဒီအခကျြနဲ့တငျ ထူးခွားနပေါပွီ။ နောကျတဈခကျြကတော့ ကာဗှနျဖိုကျဘာ အသုံးပွုထားတဲ့အတှကျ သူတို့ ထုတျလုပျခဲ့တဲ့ ကားမိုဒယျအားလုံးထကျပေါ့ပါး နပေါတယျ။ ရှလေ့ကောမှနျမပါတော့ မောငျးတဲ့သူတို့ လမေတိုးနိုငျဘူးလား ဆိုတဲ့ မေးခှနျးထုတျစရာတော့ ရှိပါတယျ။ ဟုတျပါတယျ လမေတိုးနိုငျတဲ့ နညျးပညာနဲ့ ထုတျလုပျထားတာပါ။ ဘယျလိုနညျးပညာလဲဆိုတော့ ရှဘေ့မျဘာမှာပါတဲ့ လစေုပျပေါကျတကေနေ ရှဘေ့ကျကတိုးလာတဲ့လတှေကေို စုပျယူပွီး ဘောနပျဖုံးပျေါကတဆငျ့ ကားမောငျးနှငျသူရဲ့ ခေါငျးပျေါကနကြေျောသှားစမေယျ့ နညျးပညာကို အသုံးပွုထားတာပါ။
နောကျထပျတဈခကျြကတော့ အမိုးလုံးဝ မပါဝငျပါဘူး။ အငျဂငျြအနနေဲ့ကတော့ မွငျကောငျရေ ၈၀၄ ကောငျအားရှိတဲ့4liters တာဘို V8 အငျဂငျြ တပျဆငျထားပါတယျ။ ဒီလိုစှမျးအငျထုတျလုပျမှု မွငျ့မားတဲ့ အငျဂငျြတပျဆငျထားတာကွောငျ့ တဈစက်ကနျ့အတှငျးမှာ ၀ မိုငျကနေ ၆၂ မိုငျနှုနျးအထိ အရှိနျတငျမောငျးနှငျနိုငျမှာဖွဈပွီး တဈနာရီအတှငျးမှာတော့ မိုငျ ၂၀၀ နှုနျးထိမောငျးနှငျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကားဒီဇိုငျးကိုတော့ အောကျက video မှာပဲကွညျ့လိုကျပါ။ ဒီလိုစှမျးဆောငျရညျမွငျ့မားပွီး ထူးခွားတဲ့ ကားတဈစီးရဲ့ တနျးဖိုးကတော့ ပေါငျ ၁.၄ သနျးရှိတယျလို့ဆိုထားပါတယျ။